Iindaba eNigeria nangaphaya: Ukuqaliswa kweNetflix Naija, iSharapova + Okungakumbi
NU-etflix Naija uqalisa ngokusemthethweni kwaye wabhengeza uthotho lokuqala lwaseNigeria lweNetflix, iNkundla ePhakamileyo iyasichitha isicelo sokuhlaziywa kwe-APC, uMaria Sharapova uthatha umhlala phantsi. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. I-Netflix ityhila isiza kunye neqela labadlali bokuqala bokuqala 'beNetflix Naija'
Abaphathi beNetflix Naija
INollywood lishishini lemiboniso bhanyabhanya lase-Afrika lokujoyina iNetflix kunye nentsebenziswano ye-Afrika ekhokelwa sisigqeba saseKenya, UDorothy Ghettuba. Emva kweenyanga zokuqikelela, iqonga lokusasaza bhanyabhanya lisungule iNetflix Naija ngochungechunge lwayo lwantlandlolo lwangaphambili esele lukwinqanaba lokuqalisa.
Ukutyhilwa okukhulu kwenziwa liGosa eliyiNtloko leNetflix, Ted Sarandos ngexesha lokuphehlelelwa okukhethekileyo kweNetflix Naija ebibanjwe ngoLwesibini, nge-25 kaFebruwari ngo-2020. Umlawuli wechungechunge, UAkin Omotoso ('UMoya kunye neNdlu yeNyaniso') ithathe nethuba lokutyhila i-cast kunye neqela labasebenzi ukuza kuthi ga ngoku ukuba kuthiwe luchungechunge.
Ukuthetha ngongcelele oluzayo, uOmotoso uveza ukuba isekwe kumzuzu ukusuka ebuntwaneni bakhe.
Ukujoyina i-Netflix Original uthotho lwe-cast kunye neqela ngabalawuli abangabanxibelelanisi UCJ Obasi, UDaniel Oriahi. UKemi Lala-Akindoju iya kuba nemveliso UDami Elebe Uya kubhala ngokubambisana ngelixa Kate Henshaw, Joke Silva, Bimbo Akintola, URichard Mofe Damijo ziphakathi komgangatho wokudityaniswa kwemveliso.
2. Inkundla ePhakamileyo iyasichitha isicelo se-APC sokujonga kwakhona isigwebo saseBayelsa
Inkundla ePhakamileyo ngoLwesithathu isichithile isicelo sokuba siphinde siqwalaselwe kwakhona ngoFebruwari 13, 2020, isigwebo esathi satshitshisa uloyiso luka-All Progressives Congress kunyulo lokugqibela lokulawula e-Bayelsa State.
Iphaneli yamadoda asixhenxe yenkundla ephantsi ekhokelwa nguJustice USylvester Ngwuta uchaze izicelo ezifayilishwe yi-APC kunye nommeli wazo kwi-poll, UDavid Lyon, njengexhalabisayo, ebubudenge, kwaye yenza ukuphathwa gwenxa kwenkqubo yenkundla.
Lungisa Amina Augie ofunde isigwebo esikhokelayo uthe izicelo zilingana nesimemo senkundla yokuba ihlale isibheno kwisigwebo sayo sokophula uMgaqo-siseko.
Ubambe ukuba kuyakuthi kuphule umthetho wokugqitywa kwesigqibo ukuba izicelo zivunyiwe. Uye wathi ukunikezela ezi zicelo kuzakuvula indawo yokugcwala ukuze kuphononongwe izigqibo zeNkundla ePhakamileyo.
3. Umgwebi waseKenya ubamba umkhuhlane wehagu ngexesha lohambo lwaseIndiya
Mhlekazi USmokin Wanjala
Ijaji yaseKenya ephezulu kutyelelo olunxulumene nomsebenzi e-India inyangwa esibhedlele ngenxa yomkhuhlane weehagu, iJaji eyiNtloko UDavid Maraga uthethe.
"Umgwebi weNkundla ePhakamileyo uSmokin Wanjala waye wamkelwe kunye neejaji ezintandathu zamaIndiya, kwaye wenza inkqubela phambili enkulu kwaye unokukhutshwa namhlanje [ngoLwesithathu]", Ijaji enkulu ithethile kwingxelo.
Ijaji lalikhe laya eDelhi ukuya kwinkomfa yomgwebo. Umkhuhlane wehagu ligama elidumileyo lentsholongwane yeH1N1. Iyafana neentsholongwane zomkhuhlane ezichaphazela iihagu. Ibulala malunga ne-0.1% yabo bosulelweyo. Iimpawu zayo zibandakanya umkhuhlane kunye nokubanda.
4. Intsebenzo yaseMalawi yasePakatan Harapan ibuyela ku-Anwar njengo-PM
Umzabalazo phakathi kuka-Anwar kunye noMahathir ubumbe ipolitiki yaseMalawi ngaphezulu kweminyaka engama-20
ZeMalaysia UAnwar Ibrahim ibhengezwe ngolwesiThathu umanyano lwePakatan Harapan (Alliance of Hope) lonyule lonyula lonyulo njengenkulumbuso. Amalungu e-Anwar's People's Justice Party (PKR) nawo athi alibeka phambili igama lakhe njengenkokeli yelizwe.
Isibhengezo silandela ukurhoxa emsebenzini ngoMvulo we-Nkulumbuso Mahathir Mohamad, ngoku osebenzisa iMalaysia njengendawo yokubamba. Umzabalazo phakathi kukaMahathir, oneminyaka engama-94, kunye no-Anwar, oneminyaka engama-72, owenze isivumelwano sokuphumelela kunyulo lowama-2018, ubume bezopolitiko zaseMalawi ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye ungunobangela wengxaki.
5. UMaria Sharapova uthatha umhlala-phantsi: intshatsheli kaGrand Slam yexesha lesihlanu 'utsho kuhle' kwitenetya nge-32
Iimbaleki ezi-XNUMX zeGrand Slam Maria Sharapova “Ndibulisa” kwi-tennis eneminyaka engama-32 emva kokukhubazeka okhubazekile egxeni. Ngo-2016, usebenze isibhengezo seenyanga ezili-15 emva kovavanyo lwe-meldonium. Emva kokuba ebuyile kwisibhengezo sakhe ngo-2017, uSharapova wazabalaza ukuba afumane ifomu yakhe entle kwaye wafumana ukulimala.
Ukwazisa umhlala-phantsi wakhe, uthe: “Ndimtsha kule, ke ndicela undixolele. Tennis - nditsho kuhle. Xa ndijonga emva ngoku, ndiye ndabona ukuba itenesi ibiyintaba yam. Umendo wam uzaliswe ziintlambo kunye neendawo zokuntywila, kodwa umbono ophuma kwincopho yawo ubumangalisayo. Emva kweminyaka engama-28 kunye nesihloko seGrand Slam ezintlanu, nangona kunjalo, ndikulungele ukukala enye intaba- ukukhuphisana kuhlobo lomhlaba owahlukileyo.. Olo thungelwano olungapheliyo loloyiso, nangona kunjalo? Ayisokuze inciphe. Nokuba kwenzeka ntoni na, ndiza kusebenzisa ugxininiso olufanayo, isimilo esifanayo, kunye nazo zonke izifundo endizifundileyo endleleni. "
I-Rave News Digest: uLinda Osifo ufumana iMercedes Benz, uMetuh ogwetyiweyo, isikhumbuzo sikaBryant kunye nokunye okuninzi